रंगशाला बिरो’धिहरु लाई’ अभियान्ता, लेखक ज्वाला संग्रौलाको’अहिले सम्मकै क’डा झा’पड!:: Mero Desh
रंगशाला बिरो’धिहरु लाई’ अभियान्ता, लेखक ज्वाला संग्रौलाको’अहिले सम्मकै क’डा झा’पड!
Published on: ६ बैशाख २०७८, सोमबार १०:१७
‘काठमाडौं :- सामाजिक अभियानता एबम सामाजसेवि ज्वाला संग्रौला,ले चितवन् मा बन्दैगरेको रंगशाला को बि,रोधि हरु पर्ती आ,क्रोश पोखेकी छ्न।,“समाज मा भएका बिकिर्ती हरु भ्र,स्टाचार हरु वि,रुद्ध खरो र दरो प्रस्तुत हुने सक्ने साहस राखने सामाजिक अभियानता हुन ज्वाला, अहिले तारा बराल र केही अन्य बेक्ती हरु ले रंगशालाको बि,रोध गरेको पर्ती आपत्ती जनाएकी छिन।
‘वहाँ ले भन्नू भयो रंगशाला लाखौ नेपाली जन्ता को पसि ना को कमाइ हो ” तारा बराल जस्ता २/४ जना को बेक्ति गत सम्पत्ती हैन भ’तकाउन,डोजर लाउने जस्ता अभिव्य -क्ति दिन। भन्दै समाजिक सन्जाल मा यस्तो लेखेकी छ्न। जस्ताको तेसतै तल रखेका छौ!
‘कुकुर जस्तै भु,क्ने तारा बराल र मनोज सापकोटाहरु रामपुर कृषि क्याम्पसमा हुने भ्र,स्टाचार , बि,कृति र मनपरीतन्त्रका बारे बोल्ने दम राख्छौ? २०२९ सालदेखि २०७७ सालसम्म कृषि क्याम्पसले देशैभरिका जनताको भॅुडी फुट्ने गरि भात खुवाएको प्रमाण देखाउन सक्छौ।
‘करिब एक हप्ता अघि त्यहा बिधार्थीहरुमा मा र पि ट चल्यो त्यो बारे मुख खोल्न सक्छौ? त्यहाको डिनको कार्यालयमा ताल्चा लागेको कति भो , जनतालाई बुझा -उन सक्छौ? जमिन म,रुभूमि भएको पटपटी फुटेकोबारे स्पस्टिकरण दिन सक्छौ?
‘खालि एकोहोकोरो भुकेको छ च रि त्र ह त्या गरेको छ , थोत्रा गाला बजाएको छ।“कहिले ब म प ड्काउछु भनेको छ कहिले जुत्ता हान्छु भनेको छ ! कहिले माग्ने भनेको छ ! तिमीहरुका घरमा आएर धुर्मुसले मागेको छैन !
‘बरु उल्टै तिमीहरुलाई एकमुठी चामल दान दिनु जस्ता छौ, तिमीहरुलाई एकदुई जनाले बुई बोके भन्दैमा धेरै ब क बास नगर ! गल्ली गल्ली चोक चोकमा हामीले जनता को आवाज बुझेका छौं।“रंगशालामा ब म हा न्छु भन्नेलाई कालो मोसो दलेर सिमाना क,टाउनु पर्छ भनेर बालक देखि बृद्द सम्मले भनिरहेका छन् !
‘बुझ्यौ कुरो ? अनि एकजना मनोज भन्नेले तारा बराल एक्लै छैन हामी साथमा छौं भन्दै बोलेछन् ! तर म तिमी हरु जस्ता काम न काजका मान्छेहरुलाई एक्लै च्यालेन्ज दिदै छु! चाहे मेरो साथमा कोहि होस् या नहोस् म एक्लै ल,ड्छु।
‘यस्ता बद्तमिज मान्छेहरुसॅग ! यहॅा कतिपयले धुर्मुस्लाई सपोर्ट गरेपनि बाहिर यी रंगशाला भ,त्काउछु भन्दै भुक्ने न,क,चराहरुको बि,रोध गर्न सकेका छैनन् बिबादित हुने या च,रित्र ह त्या हुने ड,रले !
‘तर जबसम्म कोहि मान्छे देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ भने उस्को लागि म लड्छु चाहे मेरो बदनाम गर या च,रि त्र ह त्या गर I (आइ डन्ट केयर)! म अरु जस्तो सेलिब्रिटी इमेज बनाएर सबैको प्रिय बन्नुपर्छ भन्ने र टोपी र फरियामा सहानुभुति थाप्दै हिड्ने मान्छे हैन !
‘मलाई लागेको कुरा दमसहित राख्छु । चमेरा हरु धेरै सल्बलाउने काम नगर , मिडियामा थुतुनो पसार्ने काम पनि नगर ! रंगशाला भ,त्काउने भन्दै भुक्दै हिडेको पनि २ महिना भो , लु डो जर लगाएर देखाउ त दम भए?? माईकमा कराउदै हिडेर रंगशाला भत्किदैन, बरु बोल्दा बोल्दै, तिमीहरुका थोत्रा गा,ला चाहि भ,त्केलान् ..
‘रंगशालामा मेरो पनि पसिनाको कमाई छ ! त्यो पैसा मैले खुसीखुसी देशको हितमा लगाएकी हॅु। एक रुपैया पकेट बाट निकालेर कसैलाई दिनु पर्दा दशपल्ट टाउको कन्याउनु पर्ने है,सियतका भुईफुट्टाहरुले भु,केको सुहाउदैन, सरम राख , ला,,ज छो,,प , नां,,गि,,एर नहिड!